६ वर्षको संघर्षपछि आमाको नामबाट नागरिकता ! |
६ वर्षको संघर्षपछि आमाको नामबाट नागरिकता !
प्रकाशित मिति :2017-08-28 11:56:47
लमजुङ | छोरी प्रमिलाले नागरिकता पाउँदा आमा भगरानी परियार छेऊमा बसेर आँशु झारीरहेकी थिईन । छोरी गर्भमा रहेको ३ महिनामानै श्रीमान बेपत्ता भएपछि उनले धेरै संघर्ष गरीन जिन्दगीमा ।
उनको संघर्षको एउटा पाटो त कहालीलाग्दो थियोनै त्योे भन्दा झनै दुःख उनले छोरीलाई नागरिकता दिलाउँदामा पाईन । लमजुङको राईनास नगरपालिका ८, तार्कुघाटकी भगरानी परियारलाई आईतबार जिन्दगीको सबैभन्दा खुशीको क्षण थियो, छोरीले आफ्नै नाउँबाट नागरिकता पाउँदाको ।
धेरै पटक नागरिकताका लागि धाएँ, भगरानीले भनिन्, ‘नागरिकताका लागि बाबुनै चाहिने भनेर मलाई पटक पटक फर्काइयो ।’ उनी कहिले वडा कार्यालय धाउँथिईन, कहिले जिल्ला प्रशासनमा । तर, उनी जहिल्यै पनि खाली हात फर्कन बाध्य थिईन् ।
उनले चिनेजानेका गाउँका सबैलाई नागरिकता दिलाउन आग्रह गरीन् तर उनले ६ वर्षसम्म नागरिकता पाउन सकिनन् । उनलाई ती संघर्षका दिन सजिला थिएनन् । छोरी सानी हुँदा त उनले जेनतेन चलाईन । तर, जब छोरी हुर्किईन तब उनले निकै समस्या भोग्नुप¥यो । ‘छोरी जहाँ जहाँ जागिरको खोजीका लागि जान्थि त्यहाँ त्यहाँ उसलाई नागरिकता आबश्यक पथ्र्यो, उनले बिगतमा भोग्नुपरेका दुःखका क्षणहरु सुनाउनु पर्दा आँखाबाट आँशुका धाराहरु झरीरहेका थिए ।
कक्षा १२ उत्र्तिर्ण भएकी प्रमिला आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भेटिएकी थिइन् । हातमा नागरिकता लिएर प्रमिला परियार खुशीले निकै गदगद थिईन् । आर्थिक रुपमा निकै कमजोर रहेकी उनले नागरिकता नपाएकै कारण पटक पटक रोजगारको अबसरबाट बञ्चित हुनुप¥यो । ‘आफुलाई जन्मदिने आमाको नाउँबाट नागरिकता निकाल्छु भन्दा पनि हामीले यति ठलो संघर्ष गनुपर्ने ?’ प्रमिलाको यो प्रश्नले राज्य ब्यवस्थालाई गिज्याईरहेको भान हुन्थ्यो ।
नेपाली नागरिक भएर पनि अनागरिक भएर बस्नुपर्दाको र्ददानक पीडा पोलीरहन्थ्यो उनलाई । हातमा नागरिकता परेपछि प्रमिलालाई अब जिन्दगीमा के गरेर देखाउँछु भन्ने लागेको छ । ‘मेरो उन्नती र प्रगतिमा जहिले पनि नागरिकतानै बाधक बन्थ्यो उनले भनिन्, ‘ अब केही गरेर समुदायमा देखाउनेछु ।’
प्रमिलालाई नागरिता दिलाउन लागिरपरेकी समाजसेवी महिला नेतृ बिष्णुमायाँ धिताल ‘महिलालाई राज्यले हेर्ने दृष्टीकोण देखेर निकै निराश थिईन । प्रमिलालाई नागरिकता दिलाईदिने मेरो प्रयास बल्ल सफल उनले भनिन् ।
सबै नियम र प्रक्रिया पुगेपछि प्रमिलाले नागरिकता पाएकी हुन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी यूवराज मैनालीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पु¥याउने जोकोहीलाई पनि हामी सजिलौ नागरिकता दिन्छौं ।’ प्रमिलालाई नागरिकता बनाउन राईनास नगरपालिकाका मेयर सिहंबहादुर थापा, महिला नेतृ बिष्णुमायाँ धिताल लगायतले पहल गरेका थिए ।